रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड सम्पन्न, गोरखाले चुम्यो उपाधी::Dang news portal
रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड सम्पन्न, गोरखाले चुम्यो उपाधी
माघ २७ तुलसिपुर दाङ ।
तुलसिपुर उपमहानगरपालिका स्तरिय दोस्रो तथा १२ औ रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०७६ को उपाधी गोरखा मा.बि तुलसिपुरले हात पारेको छ ।
तुलसिपुर उपमहानगरपालिका को आयोजना तथा सहिद स्मृति आबासिय बिधालय तुलसिपुर १७ बनकट्टीको संयोजनमा संचालित प्रतियोगिताको सोमबार सम्पन्न प्रतियोगितामा कुल १३ स्वर्ण,५ रजत र ३ कास्य पदक हात पार्दै लगातार ४ बर्ष जित कब्जा गर्दै गोरखा मा.बि.तुलसिपुरले उपाधी चुम्न सफल भएको हो ।
त्यस्तै ज्ञानज्योती सेकेण्डरी स्कुल तुलसिपुर ६ स्वर्ण,१० रजत र ६ कास्य पदकका साथ दोस्रो स्थान हात पार्दा महेन्द्र माबी तुलसिपुर ३ स्वर्ण,१ रजत र २ कास्य पदकका साथ तृतिय भयो । त्यस्तै गुरुजजुर मा.बि. रक्षाचौर २ स्वर्ण,३ रजत र ४ कास्य पदक सहित सान्त्वना स्थान हात पार्न सफल भएको प्रतियोगिताका सचिवालय सदस्य बालकृष्ण शाहले जानकारी दिनु भएको छ !
यसैबिच प्रतियोगिताको समापन समारोह तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर माया आचार्यको अध्यक्षता तथा शिक्षा मन्त्रीका प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार जीवन गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो । कार्यक्रमको संचालन प्रतियोगिताको संयोजनको जिम्मा पाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण पौडेलले गर्नु भएको थियो